5 dhir udgoon dabiiciga ah oo ka dhan ah xanuunka jilibka - TELES RELAY
ACCUEIL » Daawooyinka dabiiciga ah »5 dhir udgoon dabiiciga ah oo loogu talagalay xanuunka jilibka
5 dhir udgoon dabiiciga ah oo ka dhan ah xanuunka jilibka
Haddii aad aqriso maqaalkan, waa sababta oo ah waxaad raadineysaa qaab dabiici ah oo lagula dagaallamo xanuunka jilibka. Waxaad tan ku sameyn kartaa daaweyn habboon iyo caawimaad dheeri ah oo qaar ka mid ah dhir udgoon dabiiciga ah oo leh astaamaha anti-bararka iyo astaamaha xanuunka.
Kala soo bax maqaalkan sida dhir udgoon sida turmeric, ginger, cinnamon, clove iyo cayenne ay kuu caawin karaan. Waxaad ku dari kartaa cuntadaada si aad u aragto faa iidooyin caafimaad oo guud ahaan.
Xanuunka jilibka waa dhibaato nasiib daro caadi oo aan ku xaddidnayn hal sano oo gaar ah. Waxay la xiriiri karaan jeex jeexan ama cudur gaar ah sida arthritis, daadiyaa ama caabuq.
Astaamaha ugu weyni waa barar iyo casaan. Si kastaba ha noqotee, waxaan sidoo kale ka dhibi karnaa adkaanta, daciifnimada ama xasilloonida. Xaaladaha qaarkood, dhaqdhaqaaqa fidinta jilibka ayaa xaddidan, ama waxaan sidoo kale maqli karnaa nabarrooyinka inta lagu jiro dhaqdhaqaaqa.
Waxaan ku soo bandhigi doonaa maqaalkan liis taxane ah oo dhir udgoon ah oo ah 5 oo kaa caawin kara inaad la dagaallanto xanuunka jilibka. Si kastaba ha noqotee, waa inaan had iyo jeer la tashanaa dhakhtarka si aan u ogaano cudurka una qoro daaweynta la tilmaamaygaar ahaan haddii calaamadaha ay muhiim yihiin ama ay ka sii darayaan.
5 dhir udgoon dabiiciga ah si loola dagaallamo xanuunka jilibka
Waxaan marka hore u sheegnaa boqoradda dhir udgoon: digaag. Daaweyntan xoogga leh ee dawada loo isticmaalo tan iyoQarniyadii sababtuna tahay astaamaha anti-bararka, xanuunka, antioxidant, anticarcinogenic iyo guryaha hepatoprotective.
Xaqiiqdi, daraasado ayaa muujinaya in saameyntooda ay ka awood badan yihiin kuwa daroogada ah si loo yareeyo xanuunka. Turmeric sidoo kale waxay leedahay faa'iidada aan soo bandhigistasaameynaha dhinaca caafimaadka. Taasi waa sababta ay u tahay ikhtiyaarkeenna ugu horreeya ee lagula dagaallamo xanuunka jilibka.
Markaa, sinjibiil, oo ka soo wada jeeda isla reer turmeric, ayaa sidoo kale dawayn fiican u leh yareynta xanuunka si dabiici ah. Waxaan sidoo kale u isticmaali karnaa oo u isticmaali karnaa si korka ah (maqaarka lagu mariyo), iyada oo loo marayo adeegsiga saliidaha sinjibiilku lagama maarmaanka yahay oo lagu qasibay saliid kale.
Ka dibna helitaanka: Recipe for rooti jilicsan oo macaan
Daraasad ayaa muujisay natiijooyinka wanaagsan ee soosaarka sinjibiil koox ka mid ah bukaannada 247 ee qaba osteoarthritis ee jilibka. Daraasadda ayaa muujisay yareynta astaamaha. Si kastaba ha noqotee, waxaa lagama maarmaan ah in la ixtiraamo qiyaasta si looga fogaado dhibaatooyinka dheef-shiidka ee ay udgoonkani u keeni karo xaaladaha qaarkood.
Sidoo kale akhri: Daaweynta xoqitaanka xannuunka
3. Basbaas Cayenne, oo ka mid ah dhir udgoonnada dabiiciga ee lidka ku ah xanuunka
Basbaaska Cayenne wuxuu ka kooban yahay "capsaicin", oo ah qayb firfircoon oo firfircoon oo waliba faa'iido u leh xanuunka. Sida gorgor, Waxa kale oo suuragal ah in la isku daro isticmaalka afka iyo isticmaalka la mariyo.
Si kastaba ha noqotee, haddii aan doorto inaan ku darno basbaas cayenne saxamadaheena, Maskaxda ku hay in tani ay noqon karto wax xanaaq badan. Si kastaba ha noqotee, saameyntan waa laga fogaan karaa haddii si tartiib tartiib ah loogu daro cuntadeena.
4. Caanlon ee Ceylon
Cinnamon waa uunsi udgoon oo leh sifooyin anti-barar leh, oo ka mid ah wanaagga bogsashada badan. Waxaa loo isticmaali karaa dusha sare, lagu daro waxyaabaha kale ee ay ka midka yihiin saliidaha galleyda iyo sisinta. Tani waxay yareyn doontaa xanuunka waxayna wanaajineysaa dhaqdhaqaaqa wadajirka ah.
Waxaan kugula talineynaa inaad doorato Ceylon Cinnamon sababtoo ah saameynteeda daaweyn ee xoogga leh, marka la barbar dhigo noocyada kale. Waxaan ku dari karnaa gudaha cuntooyinkayaga macaan iyo kuwa macaan, oo gudaha ku dhex diyaari faleebo ama u isticmaal sida kabitaan.
Ugu dambeyntii, dhoobada waxaa ku jira eugenol oo aad u tiro badan. Xaruntani, oo waliba ku jirta qorfe iyo nutmeg, waxay leedahay astaamo falanqeyn ku saabsan. Xaqiiqdii, udgoonkani mar hore ayaa loo adeegsaday wakhtiyadii hore sidii dawayn lagu daweeyo ilkaha.
Waxaan u isticmaali karnaa saliid toon ah aagga ay dhibaatadu saameysey si aan uga helno gargaar. Waxay keentaa kabuubyo jilicsan oo jilibka ah. Si kastaba ha noqotee waa inaan waafaqsanahay qaabkan si aan u aragno horumar weyn.
Hada waad taqaanaa xirmooyinkaan dabiiciga ah ee 5 si loola dagaallamo xanuunka jilibka. Kaliya kaliya maahee waxay ku siin doonaan dhadhanka cuntooyinkaaga, laakiin sidoo kale waxay leeyihiin faa'iidooyin wax ku ool ah oo loogu talagalay daaweynta dhibaatooyinka caafimaad ee kala duwan. Iyaga dhadhamso oo arag faa'iidooyinkeeda!
Xawaashka 8 ee aad u isticmaali karto bedelka cusbo
Maaddaama cuntada aan horay u cunnay ay ka kooban tahay cusbo ku filan, si looga fogaado in lagu daro halkan waxaa ku jira dhir udgoon 8 si loogu beddelo milixda. Read more »
Boostada 5 dhir udgoon dabiiciga ah oo ka dhan ah xanuunka jilibka ayaa marka hore muuqatay Caafimaadkaaga hagaaji.
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://amelioretasante.com/5-epices-naturelles-contre-les-douleurs-de-genou/
Sidee ayay acupuncture u caawinaysaa yareynta xanuunka wadajirka?